यदि एक व्यक्तिले माया गर्छ र बचाउँछ ...
प्रायः त्यस्ता परिस्थितिहरू छन् जुन केटीहरूलाई शंकास्पद अवस्थामा राख्छन्। बैठकहरू, कुराकानीहरू, सम्बन्धहरू कहिलेकाहीं अचानक बाधाबाट बाधा टार्न र उत्प्रेरित गर्न दोस्रो भागको निरन्तर प्रयास गरेर बाधा बन्छ। मानिसलाई माया गर्छ र शङ्काले हामी कसरी कार्य गर्नुपर्छ? र उसले बचाउँछ भने उसले प्रेम गर्छ?
किन मानिसले संचारबाट जोगिन सक्छ?
संचारबाट बच्न, एक व्यक्तिले विभिन्न कारणहरूको लागि, तपाईंको परिचित अवस्थाको परिस्थिति र अवधिमा निर्भर गर्दछ। त्यसोभए, आइमाई महिलाले सम्पर्कबाट बच्न किन सबै भन्दा अक्सर कारणहरू विचार गरौं:
उनले मात्र एक-पटक सेक्सको योजना बनाएका छन्, उनी एक आधिकारिक पति वा प्रेमिका छन्, र तिनी अनुभव गर्दैछन्, कसरी तपाईंको आयातकले आफ्नो मापनको जीवनको बाधा बन्न सक्दैनन्।
उहाँले तपाईंलाई अपमानजनक संदेह गर्नुहुन्छ र आफ्नै अनुसन्धान सञ्चालन गर्न टाढा जानु भयो।
उहाँले परिवर्तन गर्नुभयो र दोषी महसुस गर्नुहुन्छ (त्यस्ता अवस्थामा, एक जना मानिस प्रायः आँखामा हेरिरहनु पर्दछ)।
उनले एक भारी झगडा पछि पुनः रियर र फेरि प्रदर्शन शो शुरू गर्न चाहँदैनन्।
उहाँ स्पष्ट गर्न चाहानुहुन्छ कि तपाईंको समाजले अब उनको चासो राख्दैन।
उहाँसँग काममा वा जीवनका अन्य क्षेत्रमा समस्या छ, उहाँ आफैमा लक गरिएको छ।
उहाँले तपाईंको केही अप्रिय तथ्य सिकाउनुभयो, र उसले अवस्थालाई पुन: खिच्न चाहन्छ।
उहाँ गहिरो अवसादमा हुनुहुन्छ र सबैसँग सम्पर्कबाट बच्नुहुन्छ, न केवल तपाईं संग।
उहाँले अर्को भेट्नुभयो, र उनको संग संचार द्वारा पकडिएको छ, र तपाईं टाढा बस्नुहुन्छ।
उहाँ गम्भीर बिरामी हुनुहुन्छ र तपाईं असुविधा गर्न चाहनुहुन्न।
तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, त्यहाँ धेरै कारण हुन सक्छ। और यदि एक पुरुष मा एक महिला देखि बचाव छ, यो दोगुना अजीब छ, किनकी वास्तव मा एक व्यक्ति मा संधै संचार को खोज गर्दछ।
के हुन्छ यदि मानिसबाट बचाउँछ?
यदि तपाइँ एक व्यक्तिसँग अपेक्षाकृत छोटो समयको बारेमा परिचित हुनुहुन्छ भने, यो सम्भव छ कि यसैले उहाँसँग कुराकानी गर्न इन्कार गर्न खोज्छ। सबैले दिल आउन नसकिने र सीधै भन्नु भएको छ: "माफ गर्नुहोस्, हामी अब भेट्न सक्दैनौ।" त्यस्तो अवस्थामा, कमजोर मान्छेहरूले कलको जवाफ दिदैनन्, बैठकहरू हटाउँछन्, अनि अप्रत्यक्ष रूपमा यसलाई स्पष्ट पार्छ कि तिनीहरू संचारमा रुचि राख्दैनन्। यस अवस्थामा, केही गर्न आवश्यक छैन, केवल व्यक्ति छोड्नुहोस् र गर्व देखि जानुहोस्।
यदि तपाईं एक लामो समयको सम्बन्धमा हुनुहुन्छ र यस्तो व्यवहारको कारणहरू देख्दैनन् भने, तपाईसँग कुनै विकल्पहरू छनौट छैन: तर्कहरू खडा गर्न र मानिसको साथ कुरा गर्न। एसएमएस सन्देशहरू, आदिको रूपमा आफ्नो असामान्य व्यवहारको प्रमाणलाई सम्बोधन गर्दै सम्भव छ भने केहि हप्ताको लागि हेर्नुहोस्। जब तपाईं पर्याप्त तथ्यहरू सङ्कलन गर्नुहुन्छ, विश्लेषण गर्नुहोस् र यो तपाईंको आविष्कार होइन भनेर सुनिश्चित गर्नुहोस्, तर चीजहरूको वास्तविक अवस्था, यो मानिससँग कुरा गर्न लायक छ।
कुराकानी यो योजनामा ​​अझ राम्रो छ:
पत्ता लगाउनुहोस् कि यदि उहाँसँग काममा समस्या छ, अध्ययन गर्न, आफन्तका साथ, कारहरू, आदि। सायद त्यो केवल खराब छ र उहाँ आफैमा लक गरिएको छ।
यदि आफ्नो जीवनका सबै क्षेत्रहरूमा अर्डर पूरा हुन्छ भने सोध्नुहोस् किन तपाईंको सभाहरू यति दुर्लभ भएन र सोध्नुहोस् कि यो तपाईको गल्ती हो। एक कमजोर व्यक्ति निश्चित रूपमा इन्कार गर्न सुरु हुनेछ, तर यहाँ तपाईं आफ्नो प्रमाण ल्याउन सक्नुहुन्छ, जुन तपाईं अग्रिममा तयार हुनुभयो।
सोध्नुहोस् कि उसले समय सकिन र तपाईंको रिश्तेबाट आराम गर्न चाहानुहुन्छ, एक हप्ता वा दुईको लागि एकअर्कालाई हेर्न चाहँदैन? कहिलेकाहिँ यो केवल एक व्यक्ति को लागि आफ्नो आत्मा साथीको प्रशंसा गर्न सुरु आवश्यक छ।
यस्तो कुराकानीको परिणामको रूपमा, यो कारणहरू पत्ता लगाउन लायक छ र तपाईं तिनीहरूसँग व्यवहार गर्न कसरी मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ, किनभने उनको व्यवहार तपाईंको सम्बन्ध खराब हुन्छ।
कुनै पनि अवस्थामा, बचाउन सचेतनापूर्ण लक्षण सधैं हो। मायालु व्यक्तिले आफ्नो मायालु समयका साथ आफ्नो प्रिय समय खर्च गर्न चाहन्छ, र यदि यो तपाईंको सम्बन्धको लागि काम गर्दैन, सम्भवतः भावनाहरू समान छैनन्। आफ्नो हात समय अगाडी छोड्नुहोस्, सबै चीजहरू पत्ता लगाउनुहोस् र यो निर्णय गर्नुहोस्।
मानिसलाई स्त्री चाहन्छ जब चिन्हहरू के हुन्?
तपाईं कसरी एकअर्कालाई माया राख्नुहुन्छ?
करिश्मा विकास कसरी गर्ने?
प्रेम खराब छ
कसरी मानिसलाई बहकाउन?
माया कति लामो हुन्छ?
पनीर संग सलाद
महिलाहरुमा माइक्रो स्ट्रोक को लक्षण
दूध मशरूम - कसरी हेरचाह र प्रयोग गर्ने?
यी चिप्पी स्क्यानहरू के हुन्?
फ्लाइटमा सेतो स्कर्ट
प्लास्टरबोर्डका साथ पर्खालहरू मिलाउनुहोस्
एलर्जीको लागि क्रीम
"उच्च, चन्द्रमा उच्च," पुस्तक साराको समीक्षा
स्क्विड र चिन्ताको साथ सलाद
हरियाली चियाले दबाब दिन्छ वा दबाब दिन्छ, कसरी पिउन हाईपोटोनिक र हाइपरटेन्सन पिउन सकिन्छ?
चिन्ता र अवकोडो संग सलाद
हात र खुट्टामा छाला - छाला
बतख वसा राम्रो छ र खराब छ
रतन देखि बगैचा फर्नीचर
ओभ-भुइँमा ओवनमा पकाइएको
सेन्ट पैट्रिक कैथेड्रल (मेलबोर्न)
कंकरको किरणले बिरुवाको बन्डलको साथ
नीलाबेरीले नीलाबेरीलाई के फरक पार्छ?
कंक्रीट दूधको क्रीम